Umbala oMandla ahlala ixesha elide M-XXXXL Flat Lock Stitching Lightweight Men Swimsuit |
Umbala oMdaka oQinisekisiweyo we-M-XXXXL Flat Lock Stitching Lightweight Men Swimsuit
· Ukuvalwa kwe-elastic
Ilaphu eligqibeleleyo lokusebenza ngamandla aphezulu.
· Iipaneli ezisemacaleni ezimiliselwe ngokungafaniyo nokuthungwa kuzisa eyona nkangeleko yomzimba wakho.
· Ukomelela okuphezulu ebhinqeni
Sika ukhuphiswano oludlulileyo echibini elinxibe i-jammer yobuchwephesha eyilelwe ukuphucula ukusebenza kwakho. Injineli evela kwilaphu lonyamezelo + elinendlela ezine ezolula ukugcina imilo kunye nokugqitywa kokumelana neklorine kwisitayile esihlala ixesha elide, lo emazantsi omisa ngokukhawuleza ubonelela ngendawo kunye nokuthuthuzela.
Nceda ukhethe ubungakanani obufanelekileyo ngokwale tafile yesayizi ihlaziyiweyo.
Ubungakanani M, Isinqe sama-28 `` -30 '',
Ubungakanani L, esinqeni 30 `` -32 '',
Ubungakanani XL, esinqeni 32 `` - 34 '',
Ubungakanani XXL, esinqeni 34 `` - 36 '',
Ubungakanani XXXL, esinqeni 36 `` - 38 '',
Ubungakanani XXXXL, esinqeni 37 `` - 39 ''
Ubunzima, ukomisa ngokukhawuleza kweendlela ezi-2 ezoluliweyo ezaziwa ngokugcina imilo ngokugqwesileyo kunye nokuqinisa uxinzelelo lomsipha.
Elona lungu lethu lihlala ixesha elide kwaye lithengisa kakhulu kwiiklorine. Igcina umbala kunye nemilo yokuqubha emva kokubhukuda.
Ikhlorini iyamelana kwaye iyilelwe ukuhamba. Igcina imilo ukuya kuthi ga kwi-10x ubude kunee-swimwear eziqhelekileyo.
Inkxaso efanelekileyo kunye nentuthuzelo kwabo basemanzini iintsuku ezingama-2-3 ngeveki.
Egqithileyo Ukufuma Ukuva abantu abadala abaFlexible Flex Mens Ukuqubha ukunxiba ukujonga
Okulandelayo: Ukuvalwa kweepaneli zecala Elastic Ukuvalwa kwe-29.5 ″ -45.3, Isuti yokuhlamba yamadoda
Ilaphu oluhlala luhleli alunasiliphu sihlengahlengiswayo ...
Ukuvalwa kweepaneli zecala eziValiweyo ezingama-29.5 ″ -...
I-100% yePolyester ekhawulezayo yokuDaka iiMens zoMdaka oMdaka
Ukuphefumla kweLiner enemingxuma yokuBila ngeTrunk ...
Ehlotyeni Quick Ukuqwayita Spandex / nenayiloni Men'S S ...
100% wenayiloni eprintiweyo Mens Swim Shorts ...